किन डराइरहेको छ इंग्ल्यान्ड ? « Himal Post | Online News Revolution
किन डराइरहेको छ इंग्ल्यान्ड ?
प्रकाशित मिति : २०७६, २९ असार १३:५०
काठमाडौं । लन्डनको ऐतिहासिक मैदान लर्डस्मा आज एउटा टिम च्याम्पियन हुनेछ । जसका लागि घरेलु टोली इङल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड आमनेसामने हुँदैछन् ।
इङ्ल्यान्डले फाइनलको दौरानसम्म आइपुग्दा ६० विकेट लिइसकेको छ । यता न्युजिल्यान्डको बलिङ पनि निकै राम्रो रहेको छ । न्युजिल्यान्डले पनि ६० विकेट लिइसकेको छ । तर फाइनलमा न्युजिल्यान्ड आफ्नो कप्तान विलिम्यसनको भरमा रहनेछ तर उता इङ्ल्यान्ड भने पूरै टिमको साथ प्रदर्शन गर्न मैदानमा उत्रने छ । बीबीसी